नबिल बैंकको क्यूआर भुक्तानी सेवा अब भैरहवा कान्छी बजारको तरकारी तथा फलफूल बजारमा पनि — Sanchar Kendra
नबिल बैंकको क्यूआर भुक्तानी सेवा अब भैरहवा कान्छी बजारको तरकारी तथा फलफूल बजारमा पनि
रुपन्देही । नबिल नबिल बैंकको क्यूआर भुक्तानी सेवा अब भैरहवा कान्छी बजारको तरकारी तथा फलफूल बजारमा बैंकले भैरहवा कान्छी बजारको तरकारी /फलफूल बजारमा क्यूआर भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यलय भैरहवाका निर्देशक सुदिप फुयालले फलफूल खरिद गरी क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गरी नबिल बैंकको क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु गरेका हुन् । अब यस बजारमा जाने उपभोक्ताले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन वा मोबाइल वालेट मार्फत सजिलै खरिद गरेको तरकारी /फलफूलको रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
उद्घाटनमा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यलय भैरहवाका निर्देशक सुदिप फुयालले विभिन्न तरकारी फलफूल पसलको अवलोकन र निरीक्षण गरेपछि केही पसलमा खरिद गरी आफ्नो मोबाइल बैंकिङको क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी सेवा सुरुवात गरेका थिए ।
डिजिटल कारोबारलाई प्रश्रय दिन र बिना रकम कारोबारलाई बढावा दिनका लागि नबिल बैंकले सन् २०२० को मार्चदेखि क्यूआर कोड भुक्तानी सेवा सुरु गरेको थियो । नबिल बैंक भैरहवा शाखाको पहलमा वल्र्ड लिह्क नेपालले भुक्तनी सेवालाई सहजीकरण गर्न उक्त बजार क्षेत्रमा निःशुल्क वाईफाई समेत जडान गरिदिएको छ।
बैंकको देशभर २,००० भन्दा बढी क्यूआर सेवा दिने व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु रहेका छन्, जुन हरेक दिन बढिरहेका पनि छन् । नया प्रविधि तथा नया नया प्रोडक्टको साथै सेवाहरु सुरु गर्ने काममा पनि अगाडी बढ्दै जाने बैंकले जनाएको छ ।
अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र राष्ट्र बैंकले हेर्दैन- गभर्नर
फेरी घट्यो सुन-चाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार?
राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्दा ११ प्रतिशत ब्याज पाइने